» भोईस अफ नेपालको फाईनलमा को पुग्ला ?
१४ श्रावण २०७८, बिहीबार ०८:५२
चन्द्र घलान, मकवानपुर, १४ साउन । चर्चित गायन रियालिटी शो ‘द भोईस अफ नेपाल सिजन ३’ को सेमिफाईनल राउण्ड हुँदैछ । यो साता हुने सेमिफाईनल राउण्डबाट उत्कृष्ट ८ प्रतियोगीहरुमध्ये हरेक कोचका १–१ जना गरी ४ जना प्रतियोगीहरु शोबाट बाहिरिने छन् । त्यस्तै हरेक कोचको १–१ जना गरी उत्कृष्ट ४ जना प्रतियोगीहरु फाईनलका लागि छनौट हुनेछन् । दर्शक भोटका आधारमा हुने यो नतिजा कारण यो साता सेमिफाईनलमा धमाका हुने अनुमान छ । उत्कृष्ट ८ मध्ये कुन कुन प्रतियोगीहरु फाईनलमा पुग्लान् ? कसको छ फाईनलमा पुग्ने बलियो आधार ? हामी यस भिडियोमा यसैका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । तपाईको विचारमा कुन प्रतियोगीहरु फाईनलमा पुग्लान् ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् ।
यो साता कोच दिपबाट गोबिन पून र आर्यान तामाङमध्ये एक जना बाहिरिने छन् भने १ जना फाईनलका लागि छनौट हुनेछन् । ब्लाईण्ड अडिसनमा चारै जना कोचलाई आफुतर्फ फर्काउन सफल गोबिनलाई निर्णायकहरुले ब्लाईण्ड अडिसनबाटै फाईनलमा पुग्ने चर्चा गरेका थिए । उनी सेमिफाईनलमा आईपुग्दासम्म लाईभ राउण्डमा एकपटक पनि बटम लाईनमा परेका छैनन् । तर बुटवलका गोबिनलाई टक्कर दिने अर्को आवाज आर्यान तामाङ पनि फाईनलको दाबेदार हुन् । दार्जिलिङका आर्यनले लाईभ शोको पहिलो एपिसोडमा पफोमर अफ द डे अवार्ड जितेका थिए । मेलोडियस आवाजका कारण चर्चामा रहेका उनले पनि लाईभ राउण्डमा एकपटक पनि बटम लाईनको सामना गरेका छैनन् । बटम लाईनका आधारमा उनीहरु दुबै बराबर छन् भने अवार्डका हिसाबमा आर्यन अगाडि छन् । त्यसैले उनीहरुमध्ये कुन प्रतियोगी फाईनलमा पुग्लान् भनेर यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
त्यस्तै कोच राजुको टिमबाट तारा श्रीस मगर र सोनाम शेर्पामध्ये १ जना मात्र फाईनलमा प्रवेश गर्नेछन् । सर्वाधिक चर्चामा रहेकी तारा सिजन ३ मा चारै जना कोचलाई आफुतर्फ फर्काउन सफल प्रतियोगी पनि हुन् । ताराको आवाज द भोईस ग्लोबलमा मार्च महिनाको उत्कृष्ट प्रस्तुतिका रुपमा छनौट हुन सफल भएको थियो । उनी भोईसको स्टेजमा भर्सटाईल गायिकाका रुपमा चिनिएकी छिन् । उनले उत्कृष्ट ११ को प्रस्तुतिका क्रममा पफोमर अफ द डे अवार्ड जितेकी थिईन् । उनले लाईभ राउण्डमा हालसम्म एकपटक पनि बटम लाईनको सामना गरेकी छैनन् । त्यस्तै दमदार प्रस्तुतिका कारण चिनिएका सोनाम शोमा क्याप्टेन सोनामका नामले पनि परिचित छन् । उनले पनि लाईभ राउण्डमा एक पटक पनि बटम लाईनको सामना गरेका छैनन् । अवार्डका हिसाबमा तारा सोनाम भन्दा अगाडि देखिएका छन् भने चर्चाका हिसाबमा दुबै जना उत्तिकै चर्चित छन् । त्यसैले उनीहरुमध्ये कुन प्रतियोगी फाईनलमा पुग्लान् भनेर यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
कोच प्रमोदको टिमले सर्वाधिक चर्चित प्रतियोगीहरु गुमाउँदै २ धुरन्धर प्रतियोगीहरुलाई सेमिफाईनलसम्म डोराएको छ । कोच प्रमोदको टिमबाट किरण गजमेर र रवि गहतराज सेमिफाईनलमा भिड्दैछन् । यी दुईमध्ये १ जना मात्र फाईनलमा पुग्नेछन् । भोईसमा सहभागी हुनुपूर्व नै चर्चामा रहेका किरण चारै जना कोचहरुलाई आफुतर्फ फर्काउन सफल प्रतियोगी हुन् । उनले उत्कृष्ट ११ को प्रस्तुतिका क्रममा पफोमर अफ द डे अवार्ड जितेका थिए । उनले लाईभ शोमा उत्कृष्ट ११ को छनौटको क्रममा र उत्कृष्ट ८ को छनौटको क्रममा गरी २ पटक बटम थ्रीको सामना गरेका छन् । विशेषगरी युवामाझ चर्चित रहेका किरणलाई धेरैले भोईसको विजेतका रुपमा चर्चा गरेका छन् । तर अन्य कोचको टिमसँगमात्र नभई उनको आफ्नै टिममा पनि उनलाई टक्कर दिने अर्का प्रतियोगी भएकोले उनको फाईनल यात्रा त्यति सहज देखिँदैन । उनलाई सिक्किमका रवि गहतराजले कडा टक्कर दिँदैछन् । रक मात्र नभई मेलोडीमा पनि दमदार प्रस्तुति दिँदै आएका रविले फाईनलमा पुग्नसक्ने बलियो सम्भावना कायम नै राखेका छन् । उनले उत्कृष्ट ९ को प्रस्तुतिपश्चात पफोमर अफ द डे अवार्ड जितेका थिए । उनले उत्कृष्ट ८ को छनौटका क्रममा पहिलो पटक बटम लाईनको सामना गरेका थिए । बटम लाईनका हिसाबमा रविभन्दा किरण खतरामा छन् । तर अवार्डका हिसाबमा भने यी दुबै प्रतियोगीहरु समान देखिएका छन् । त्यसैले उनीहरुमध्ये कुन प्रतियोगी फाईनलमा पुग्लान् भनेर यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
त्यस्तै कोच तृष्णाको टिममा पनि २ जना अब्बल प्रतियोगीहरु सेमिफाईनलमा भिड्दैछन् । कोच तृष्णाको टिमबाट अफ्रिता खड्गी र ज्वाला राई फाईनलका लागि भिड्दैछन् । रकमात्र नभई मेलोडीमा पनि अब्बल देखिएकी अफ्रिताले ज्वालालाई कडा टक्कर दिँदैछन् । उनले लाईभ शोमा उत्कृष्ट ११ को छनौटको क्रममा र उत्कृष्ट ९ को छनौटका क्रममा गरी दुई पटक बटम थ्रीको सामना गरेकी छिन् । ज्वाला पनि फाईनलमा पुग्न दमदार तयारीमा छन् । सबै प्रकारका गीतमा उत्तिकै राम्रा देखिएका ज्वालाले लाईभ शोमा उत्कृष्ट १० को छनौटको क्रममा पहिलो पटक बटम थ्रीको सामना गरेका थिए । बटम लाईनका आधारमा ज्वाला अगाडि छन् भने चर्चाका हिसाबमा यी दुबै प्रतियोगीहरु उत्तिकै दाबेदार छन् । त्यसैले उनीहरुमध्ये कुन प्रतियोगी फाईनलमा पुग्लान् भनेर यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–